Ugaas Mustafe iyo Madaxweyne Mustafe Cagjar oo Addis Ababa u jooga arin xasaasi ah – Xeernews24
27. Februar 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Ugaas Mustafe iyo Madaxwaynaha Soomaali-State Mudane Mustafa Muxumed Cumar ayaa saaka u anbabaxay Caasimada Dalka ee magaalada Addis Ababa halkaas oo uu kaga qayb gali doono kulan ay la yeelanayo Maamulka kililka Canfarta.
Kulankan oo Ugaas Mustafe iyo Madaxwaynuhu waxaa uu yimid kadib kolkii maamulka Degaanka Canfarta ay aqbaleen shuruudihii wada hadalka oo uu ugu horeeyo in si bilaa shuruuda loo sii daayo Cusmaan Mire oo ku xidhan Degaanka Canfarta.
Kulankan oo muhiimadiisa ugu wayn ay tahay sidii dadka walaalaha ah ee Soomaalida iyo Canfarta ay si xaal wara looga gadhiilaha colaadaan sokolba noqonaysa waxaa uu maantaba ka qabsoomayaa Addis Ababa.
Kulanka wuxuu ku soo beegmay wakhti ay xaaladda gobolka Sitti iyo is maamulka Canfarta marayso heerkii ugu xuma abid dagaalo lagu hoobtayna ka socdaan degmadda Gablalu oo ay ciidamada Liyuu booliska Canfartu ka geysteen dhacdooyin foolxun oo dad shacab xoolada dhaqato ah lagu wax yeeleeyey.
Dawlada Pakistan oo sheegtay in ay dhulka soo dhigtay labo diyaarad dagaal... SAWIRRO: Wararkii ugu dambeeyay Daandaansiga iyo Xiisada Maanta ka dhex taagan...